Baarlamanka Puntland oo ansixiyey xeerka saxaafadda & wariyaasha oo ka carooday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta meelmariyay xeerka warbaahinta Puntland oo ay dhawaan baarlamaanka hordhigtay wasaaradda warfaafinta ee maamulkaas.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, Saciid Xasan Shire ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta loo qaaday xeerka, wuxuuna sheegay in kulanka oo ay soo xaadireen 37 xildhibaan ay 32 gacan-taag ugu codeysay, hal xildhibaanna uu diiday, halka 4 kale ay ka aamuseen.
Suxufiyiinta Puntland oo ka dib marka la ansixiyay xeerkan shir ku qaatay aqalka gollaha wakiiladda ayaa ka hor yimid xeerka oo ay ku tilmameen inuu yahay mid aan saxafadda Puntland dan u ahayn.
Gudoomiye ku xigeenka ururka suxufiyiinta, Maxamed Daahir Yusuf ”Saalim” ayaa madaxwaynaha ugu baaqay inuusan xeerkan saxiixin maadama uu yahay mid aan matali karin saxafadda oo madaxda wasaradda warfaafinta ay wax ka badal ku sameeyeen.
”Xeerkan waxa uu ka hor imaanayaa Dastuurka, baarlamaankana wuu ka hoos baxay, xeerkan ma ahan mid dadka iyo saxafada Puntland dan u ah ma ahan midaan danahayaga ka eegaynay ee wuxuu ahaa mid dan guud ah, balse waxaad moodaa nasiib daro barlamaanka inay hoos galisay wasaradda warfaafinta” ayuu yiri Saalim.
Saxafadda ayaa sheegtay in xeerkan baarlamaanka loo hoos galiyay isla markasna uusan ahayn kii sharciga ahaa ee dhowrka jeer laga dooday oo la wada falanqeeyay.
Qodobada sida carada leh ay warbaahinta ugu xumaadeen ayaa ahaa in lagu soo daray in wariyaha Puntland ku sugan ay aqoonsiga siinayso wasaradda warfaafinta halka markii hore lagu wada heshiiyay in aqoonsiga wariyaha ay bixiso Ururka suxufiyiinta MAP.
Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdiwali Xirsi Indhoguran oo ka hor hadlay baarlamanka maalintii uu xeerkan hor geynayay ayaa saxafadda dhaleeceeyay kuna tilmaamay inay yihiin kuwo qayru mas’uul ah isla markasna u baahan in lagu dhaqo xeer adag.